२०७८ जेठ ४ मंगलबार १९:३२:००
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले कोभिड– १९ को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारको थप प्रयास नरहे अझै भयावह स्थिति आउन सक्ने बताएका छन् । ‘समुदायस्तरमा कोरोना फैलिएर भयावह स्थिति बनेको छ, सरकारको यस्तै प्रयास र तयारी रहिरहने हो भने केही महिनामा झनै भयावह स्थिति आउन सक्छ,’ डा. कोइरालाले भने ।
कांग्रेसको कोभिड– १९ अनुगमन समितिले मंगलबार गरेको प्रदेश १ का नेता कार्यकर्तासँगको छलफलमा नेता कोइरालाले सरकारले अब आफ्नै बजेटले खोप खरिद गरेर सबै नेपालीले खोप पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘अब माग्ने वेला छैन, अब मागेर कुनै पनि देशले दिँदैन, दिन सक्दैन, अब किनेर ल्याएर नै लगाउनुपर्छ, सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेर नेपाली जनताको जीवनरक्षा गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
डा. कोइरालाले कोरोना संक्रमित अधिकांश नेपालीका लागि होमआइसोलेसन उपयुक्त नभएको बताए । ‘अहिले धेरै संक्रमित घरमै बसेको कुरा छ, तर त्यो उपयुक्त होइन, त्यसले झनै धेरै संक्रमण फैलिने सम्भावना हुन्छ,’ डा. कोइरालाले भने, ‘मलाई लाग्छ, ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै जनताका घरमा एउटा मात्रै शौचालय छ, एउटै कोठामा तीन–चारजनासम्म बस्नुहुन्छ । परिवार बस्नुहुन्छ । त्यस्तो घरमा होमआइसोलेसन बस्नु सुरक्षित हुँदैन, उहाँहरूलाई संस्थागत आइसोलेसनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
डा. कोइरालाले रोगसँग भोकको भयावह स्थिति आउने भएकाले त्यसका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याउन कांग्रेसले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीको बोलीमाथि डा. शेखर कोइरालाको टिप्पणी- पाकिस्तानमा तानाशाहीको पतन अदालतले गरेको हो
राष्ट्रपतिबाट फेरि संविधान च्यात्ने काम भयो : डा. शेखर कोइराला
संवैधानिक परिषद् बैठक रोक्न कांग्रेस नेता कोइरालाको माग
डा. शेखर भन्छन्– यो सरकार जति दिन रहन्छ, देश त्यति नै अनिश्चितताको भुमरीमा फस्ने पक्का छ